Hiv-Sverige – Somali - We Are Survivors
Hiv-Sverige – Somaliwearesurvivorsse2015-09-06T08:07:43+02:00
HIV waa uu jiraa oo qof kasta waa uu ku dhici karaa – sidaas awgeed dhammaanteen waa uu ina saameeyaa HIV. Qof kastaa waxa uu leeyahay masuuliyada uu ku caawiyo yaraynta faafida HIV iyo nacaybka ku meersan. Ku dhiiro in aad la hadasho saaxiibada, qoyskaaga iyo lamaanahaaga waxa ku saabsan HIV. Waxaa jiri kara qof adiga kugu dhow oo ka baqanaya in uu qofna in ay qabaan HIV. Ka hadalkeeda waxaad caawin jebinta aamuska iyo nacaybka.